13 / 05 / 2021 03 / 06 / 2021 ရော့ Paton 780 Views စာ0မှတ်ချက် 1970 Dodge Challenger T / A, 76904 Mopar Dodge // SRT Top Fuel Dragster နှင့် 1970 Dodge Challenger T / A, 76905 Ford GT Heritage Edition နှင့် Bronco R, Dodge, Dodge Challenger, နဂါး, Lego, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, Lego Speed Champions, Mopar Dodge // SRT ထိပ်တန်းလောင်စာဆီ Dragster, reviews, Speed Champions
အသက်ပြင်းပြင်းရှူခြင်း - ဤတွင်ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်ဖြစ်သည် Lego Speed Champions အစုံ 76904 Mopar Dodge // SRT Top Fuel Dragster နှင့် 1970 Dodge Challenger T / A.
၏ 2021 နှစ်လယ်ပိုင်းတွင် XNUMX လှိုင်း၏ Speed Champions အစုံလိုက်များသည်ခေါင်းစဉ်၏သမိုင်းတွင်အရှည်ဆုံး (နှင့်အနည်းဆုံးရယ်စရာ) သတ်မှတ်ထားသည့်နာမည်အတွက်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်သည် - သမိုင်းကြောင်း - စာဖြင့်ရေးသားဆက်သွယ်မှုကိုသင်၏နားလည်မှုကိုစမ်းသပ်ရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသည့်ပုဒ်ဖြတ်ပုဒ်ဖြတ်ခြင်းအဆင့်အမျိုးမျိုးဖြင့်နှစ်ဆကားသတ်မှတ်ခြင်းပါ ၀ င်သည်။
သုံးရှေ့ဆက်အတွက်မျဉ်းစောင်း 76904 Mopar Dodge // SRT Top Fuel Dragster နှင့် 1970 Dodge Challenger T / A တကယ်က ap ကို set ကိုကူညီကြဘူးart ပြိုင်ဘက်များထံမှ - မည်သည့်နေရာမှမည်သည့်နေရာတွင်မည်သည့်နေရာမှအမည်မဖော်ပြနိုင်ပါကမည်သည့်နေရာတွင်မဖတ်နိုင်ပါ 76904 Mopar Dodge // SRT Top Fuel Dragster နှင့် 1970 Dodge Challenger T / A သေတ္တာထဲမှာဘာကိုထွက်မတ်တပ်ရပ်?
theme: Speed Champions အမည်သတ်မှတ်မည် - 76904 Mopar Dodge // SRT Top Fuel Dragster နှင့် 1970 Dodge Challenger T / A ဖြန့်ချိ: ဇြန္လ 1, 2021
စျေးနှုန်း: £ 44.99 / $ 49.99 / € 49.99 အပိုင်းပိုင်း: 627 အသေးစားပုံများ: 2
တ ဦး တည်းအရာအဘို့, နှစ် ဦး စလုံးမော်တော်ယာဉ်များအတွက်ပထမ ဦး ဆုံးကမ်းလှမ်းမှုကိုပါဝင်သည် Lego Speed Champions မျဉ်းကြောင်း။ ယုံချင်ယုံမယုံချင်နေ, 76904 Mopar Dodge // SRT Top Fuel Dragster နှင့် 1970 Dodge Challenger T / A ပထမဆုံးသောခရမ်းရောင်မောင်းနှင်မှုကိုခေါင်းစဉ်၏ခြောက်နှစ်သမိုင်း၊ ၁၉၇၀ Dodge Challenger T / A နှင့်မည်သည့်ယာဉ်တွင်မဆိုပါ ၀ င်သည်။ Speed Champions ကြောင်း p ထိုက်တန်ပါတယ်articular ဂုဏ်အသရေ, ကဒီတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်။
၁၉၆၉ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ထုတ်လုပ်မှုကုန်ဆုံးချိန်မှ စတင်၍ ၁၉၆၄ ခုနှစ်အရောက်တွင်မည်သည့်အရောင်မျိုးကိုမဆိုထုတ်လွှတ်သောကားသည် ၁၉၇၄ ခုနှစ်အထိဖြစ်သည်art Dodge Challenger ၏ယဉ်ကျေးမှုနှင့်တူသောအဆင့်အတန်းကို Plum Crazy Purple ဟုအမည်ပေးထားသည့်မှောင်မိုက်သတ္တုအရောင်ဖြင့်အထူးထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
The Challenger သည် Dodge ၏မြင်းကားစျေးကွက်သို့ ၀ င်ရောက်မှုနှောင်းပိုင်းဖြစ်ပြီး Ford Mustang က ၁၉၆၀ ပြည့်လွန်နှစ်များကစတင်ခဲ့ပြီး ၁၉၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတစ်လျှောက်တွင်ပိုမိုပြင်းထန်လာခဲ့သည်၊ ပိုမိုသေးငယ်သော၊ ပိုမိုတတ်နိုင်သော၊ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသော၊ ပုံစံကျသည့် coupes သို့မဟုတ် convertibles ဖြစ်ရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး Challenger V1960 အင်ဂျင်က၎င်းကို ၁၉၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များ 'Pony Car Wars' မှထွက်ပေါ်လာသည့်ကြွက်သားကားအမျိုးအစားခွဲများသို့လုံးလုံးလျားလျားတွန်းအားပေးခြင်းရှိမရှိနှင့် ပတ်သက်၍ ဆက်လက်ငြင်းခုံမှုများရှိနေသည်။ ထုတ်လုပ်သူများကဤမော်တော်ယာဉ်များကိုစက်ရုံမှပံ့ပိုးကူညီသည့်ပြိုင်ကားများဖြင့်ထုတ်လုပ်သည့်အခါ။
အမှန်စင်စစ်အရောင်ထက်ကျော်လွန်သည် part မြင်းနှင့်ကြွက်သားကားများကိုယနေ့တိုင်အောင်အဘယ်ကြောင့်တန်ဖိုးထားရခြင်း၏အကြောင်းရင်းမှာလမ်း၊ လမ်းနှင့်ထရမ်အမ်စီးရီး၏လေဆိပ်အခြေစိုက်ပြိုင်ဆိုင်မှုများပင်ဖြစ်သည်။ နှင့် partကြောင်းအတွက် icipation (နှင့်ထုတ်လုပ်သူ p ထုတ်လုပ်မှုထုတ်ဝေထုတ်ပေးကြောင်းဖော်ပြထားစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေarticipating ကားများ - ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ပေါင်းများစွာတည်ဆောက်ခဲ့သော Dodge Challenger T / A (Trans-Am) - နှစ်များတစ်လျှောက်အခြား Dodge တွင်ပါဝင်သည်။ Lego ဤနေရာတွင်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။
၎င်းသည် Trans-Am စီးရီးကိုအနိုင်ရခဲ့ခြင်းမရှိသော်လည်း ၁၉၇၀ Dodge Challenger T / A သည်ယခုနှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော်ကာလအတွင်းအထင်ကရစက်အဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့သည်။ ဤသည်တိကျသောမော်ဒယ်ကိုလည်းရှည်လျားစစ်ဆေး - စာရင်းနှင့်အတူပါရှိသည်artအဆိုပါထားကြောင်း icular ဒီဇိုင်းရှုထောင့် Lego ကားမှာတွေ့ပြီ 76904 Mopar Dodge // SRT Top Fuel Dragster နှင့် 1970 Dodge Challenger T / A အောက်မှာ particular စိစစ်။
ရှေ့ဘက်နှင့်နောက်ဘက်ဖျက်လိုဖျက်ဆီးများ၊ 'megaphone' အိပ်ဇောတိုင်များ၊ ခရုမ်းအချက်အခြာများနှင့်သေးငယ်သည့် 'သန့်စင်ပြီး' နောက်ဘက်ပြတင်းပေါက်များသည် ၁၉၇၀ T / A ပုံစံနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ နေစဉ် Lego ဗားရှင်းသည်သင်မျှော်လင့်ထားသည့်မျှော်လင့်ခြင်းထက်နေရာများစွာ၌ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ ၎င်းသည်ဤအရာအားလုံးပါ ၀ င်သည်။ အထူးသဖြင့် megaphone exhaust အချက်အလက်များကဲ့သို့သောတီထွင်မှုဆိုင်ရာအဆောက်အအုံထက်ပိုမိုတီထွင်ဖန်တီးမှုလိုင်စင်ရှိသည်။ Speed Champions မဟုတ်ရင်ပူဇော်နိုင်ပါတယ်။
အချို့သောမမျှော်လင့်ဘဲနီးပါးမလိုအပ်သောအသုံးချမှုများရှိသည် Lego အပိုင်းများအကြားသင်္ချာလိုက်ဖက်တဲ့၏ပိုမိုမြင့်မားနားလည်မှုကိုသရုပ်ပြသောဤမော်ဒယ်အတွက်ကစားမှာစနစ်ကတည်ဆောက်ခြင်း။ သို့သော်ကားများအားလုံးအတူတကွစုစည်းသောအခါတွင်ကားများအလိုအလျောက်ရောင်းရန်အတွက်စတစ်ကာများနှင့်အရောင်များကိုမှီခိုနေရဆဲဖြစ်သည်။
ထိုအချက်များပေါင်းစပ်အဖြစ်ကအလုပ်လုပ်တယ်, ဒါကသေချာ Lego Dodge Challenger p ထိုင်ပါart၁၉၂၈ နွေရာသီအကွာအဝေးရှိအခြားရှစ်လုံးပါသည့်ကြွက်သားကားတစ်စီးဘေးမှ ၁၉၆၈ Chevrolet Corvette နှင့်အလွန်နီးစပ်သည် 76903 Chevrolet Corvette C8.R ပြိုင်ကားနှင့် 1968 Chevrolet Corvette ။
ဘာကြောင့်မဖြစ်တာလဲဆိုတာကိုသင်နားလည်နိုင်ပေမဲ့နှစ်ခုလုံးကကံဆိုးချင်သေးတယ် classic ကြွက်သားကားများတစ်တွဲ၌တွဲဖက်မထားပါ Lego တကယ်ထားပြီ အဲဒီအစား, 1970 Dodge Challenger T / A သည် Mopar Dodge // SRT Top Fuel Dragster နှင့်အတူလာသည်။ Mopar သည်အဖွဲ့၏အမည်ဖြစ်ပြီး Top Fuel သည်ဆွဲအားပြိုင်ကားအမျိုးအစားဖြစ်ပြီးကမ္ဘာပေါ်တွင်အမြန်ဆုံးအရှိန်မြှင့်ကားများကိုထုတ်လုပ်ကာအမြန်နှုန်း 335mph သို့ရောက်ရှိသည်။ ၎င်းကို Top Fuel ဟုခေါ်သည်။ မည်သည့်ယာဉ်များအတွက် - partအားကစား၏အစောပိုင်းကာလများတွင် icular - အမြန်ဆုံးအမြန်နှုန်းကိုရောက်ရှိရန်အင်ဂျင်ကိုစွမ်းအားပေးရန်အန္တရာယ်အရှိဆုံးနှင့်မတည်ငြိမ်သောလောင်စာကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
Drag racers များသည်ဒီဇိုင်းနှင့်တမူထူးခြားသည်။ အမြင့်ဆုံးအနောက်ဘက်တောင်ပံများနှင့်အတူကြီးမားသောအင်ဂျင်များနှင့်ဘီးများနှင့်ဆန့်ကျင်။ ကြီးမားသောအင်ဂျင်များရှေ့ရှေ့သို့ရောက်သောသူတို့၏ရှည်လျား။ ပါးလွှာသောဘောင်များ၌ထင်ရှားသည်။ Dragsters လည်းရောနှော - စartထိပ်တန်းလောင်စာ - icularly - အင်ဂျင်ဖွဲ့စည်းမှုကဲ့သို့သောဒေသများရှိကားပစ္စည်းများနှင့်ဒီဇိုင်းအပါအဝင်အခြားရှုထောင့်များတွင်အဆင့်မြင့်နည်းပညာဒီဇိုင်းနှင့်အတူအကြီးအကျယ်ကန့်သတ်, ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာနည်းပညာ။
၁၀၀၀ ပေ / ၃၀၅ မီတာအကွာအဝေးတိုသောအကွာအဝေးများမှမြင့်မားသောအမြန်နှုန်းဖြင့်ယှဉ်ပြိုင်နေသည့်ဆွဲပြိုင်သမားကဲ့သို့ပုံသဏ္ဌာန်မရှိပါ။ 76904 Mopar Dodge // SRT Top Fuel Dragster နှင့် 1970 Dodge Challenger T / A လက်ဆောင်များ Speed Champions မောင်းသောအထည်ကိုဝတ်ထားတဲ့ပထမဆုံးကားနဲ့ပရိတ်သတ်တွေကပထမ ဦး ဆုံးဆွဲပြိုင်ကားမောင်းသူလည်းပါပါတယ်။
တစ် ဦး dragster မှချက်ချင်းဖော်ထုတ်အရာအားလုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းဒီထဲမှာဖမ်းမိသည် Lego ဒီအခြေခံသည် Top Fuel dragster ၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုအသေးစိတ်ကျသောအသေးစိတ်အချက်အလက်များများစွာရှိသကဲ့သို့။ ၎င်းကို Team Mopar ၏အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ပေါင်းစပ်ပြီးစစ်မှန်သောလေကြောင်းရှိသည်city ဤ Lego သင်တစ် ဦး dragster ၏အသေးစိတ်အချက်များနှင့်အတူကျွမ်းတဝင်မရှိသောရင်တောင်ဗားရှင်း။ နည်းလမ်းများစွာအနေဖြင့်၊ မော်ဒယ်သည်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ရန်မလိုအပ်သောကြောင့်၎င်းသည်မလိုအပ်ပါ။ သို့သော်သင်သည် dragster ၏အင်ဂျင်၏ဖွဲ့စည်းပုံကိုလေ့လာနေသည်ဆိုလျှင်၎င်းသည်မည်မျှအံ့အားသင့်ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်နက်ရှိုင်းစွာတန်ဖိုးထားခြင်းခံရလိမ့်မည်။ Lego ကားကအုတ်နဲ့ပြန်လုပ်ပေးတယ်။
ရှစ်လုံးပါသောဒီဇိုင်းသို့ပြောင်းလဲခြင်းသည်၎င်းနှင့်အတူပေါင်းများစွာသောအချက်များနှင့်အသေးစိတ်နှင့်စစ်မှန်မှုကိုစူးစမ်းလေ့လာရန်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုရရှိစေသည်city ဘယ်တော့မှမတိုင်မီတူသောမော်တော်ယာဉ်များအတွက် Lego ပုံစံ - နှင့်ဤအစုအတွက်နှစ် ဦး စလုံးကားများထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အကျိုးရှိ - Challenger နှင့် dragster နှစ် ဦး စလုံး၏စကေးအတွက်အနည်းငယ်ပြissuesနာများရှိပါသည်။ အချိုးညီမျှမှုနှင့်ဒီဇိုင်းကိုရှူရှိုက်မိရန်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည် Speed Champions တဒီဂရီသို့မဟုတ်အခြားကားများ။ ဒီနေရာမှာအတော်လေးကိုသိသာထင်ရှားပါတယ်။ ကြွက်သားကားရဲ့ဒီဇိုင်းကအနည်းငယ်ရှည်လွန်းပြီးပါ ၀ င်တဲ့အသေးစားဓာတ်ပုံအတွက်လည်းရှည်လွန်းနေပြီး dragster ကအရမ်းရှည်လွန်းပြီးရှည်လျားလွန်းနေသည်။
၎င်းသည်သေးငယ်သောဝေဖန်မှုတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း p ကိုသတိပြုသင့်သည်artအဆိုပါ dragster ၏ဖြစ်ရပ်အတွက် icularly - သင်မဟုတ်ရင်ထိုကဲ့သို့သောရှည်လျားသောမော်တော်ယာဉ်မျှော်လင့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒါဟာမကြာသေးမီကထက်အနည်းငယ်ပိုရှည်ပါတယ် X- တောင်ပံ...
ကားမောင်းရန်အတွက်အသေးစားဓာတ်ပုံတစ်ခုပါ ၀ င်သည်။ ပြိုင်ကားမောင်းပြိုင်ပွဲများတွင်ပိုမိုပြည့်စုံသော set-specific ဒီဇိုင်းမှဆွဲပြိုင်သမားသည်အကျိုးအမြတ်ရရှိသည်။ သို့သော် Challenger မောင်းသူအတွက်လိမ္မော်ရောင်ဂျာကင်အင်္ကျီကိုယ်ထည်သည်အထူးသီးသန့်ဖြစ်သည်။ အနက်ရောင်အစင်းနှင့် Dodge တံဆိပ်ပါသည့် Dodge Scat Pack Club ၏မူလဂျာကင်ဒီဇိုင်းကို အခြေခံ၍ အစုံလိုက်တွင်ပါ ၀ င်သည့်အီစတာကြက်ဥသည်အထူးသီးသန့်ဖြစ်သည်။
76904 Mopar Dodge // SRT Top Fuel Dragster နှင့် 1970 Dodge Challenger T / A 2021 နွေရာသီ၏အဆစ်အများဆုံးစျေးဆိုင်သည် Lego Speed Champions £ 44.99 / $ 49.99 / € 49.99 မှာလာမယ့်အစုံ။ ၎င်းသည်အပိုင်းအစများစွာ၌ကြီးမားကျယ်ပြန့်သည်ကိုခံစားရသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်နောက်ဆုံးပေါ်ထုတ်လွှင့်မှုလှိုင်းများ၌၎င်းသည်အကောင်းဆုံးတန်ဖိုးရှိမရှိ၊
၎င်းသည်ဆွဲငင်သူများအနီးတွင်ပိုမိုသန့်ရှင်းသောအရသာလိုအပ်သည် 76904 Mopar Dodge // SRT Top Fuel Dragster နှင့် 1970 Dodge Challenger T / A apart။ Dragster နှင့်ကြွက်သားကားတစ်စီးကိုအတူတကွတွဲဖက်ထားခြင်းကပုံမှန်မဟုတ်သောပေါင်းစပ်မှုကိုဖြစ်စေသည်။ သို့သော်တစ်ခုမှာသေတ္တာများထဲမှတစ်ခုတည်းသောထုတ်လုပ်သူများနှင့်ကပ်နေသည်။
အတော်များများအတွက်တူညီတဲ့အခြေအနေပါ Speed Champions ထိုကဲ့သို့သောနှင့်အတူအဖြစ်နှစ်ဆ packs 76903 Chevrolet Corvette C8.R Race Car နှင့် ၁၉၆၈ Chevrolet Corvette၊ သင့်တွင်ခေတ်မီပြိုင်ကားကားနှင့်အသက် ၅၀ အရွယ်ကြွက်သားကားများရှိသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်နွေရာသီတွင်ကားသမိုင်းတွင်ကြီးကျယ်သောကြွက်သားကားကြီးနှစ်ခုရှိခဲ့ရာမှတစ်ချိန်တည်း၌ကားသမိုင်းတွင်တစ်ချိန်တည်း၌ဘေးချင်းယှဉ်။ ထိုင်နေခြင်းမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ Lego အစုံ
ဖြစ်လာခဲ့လျှင် 76904 Mopar Dodge // SRT Top Fuel Dragster နှင့် 1970 Dodge Challenger T / Aရှင်းရှင်းလင်းလင်း Challenger သည်ကားလောကရှိ၎င်း၏အနေအထားနှင့်၎င်းကိုကားကိုဖြစ်စေသည့်ဒီဇိုင်းအချက်များနှင့်၎င်းကိုကားကိုဖန်တီးစေသည့်အပြင်၊ Lego ဗားရှင်း။ Dragster သည်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောတည်ဆောက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဓိကအားဖြင့်ပထမဆုံးသောအမျိုးအစားဖြစ်သည် Lego Speed Champions line-up (မော်ဒယ်ရှိအသေးစိတ်အနက်ကိုအမှန်တကယ်တန်ဖိုးထားရန်ကျွန်ုပ်တို့အားနည်းပါးသူများသည် dragsters နှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုအများအပြားရှိမည်ဖြစ်သောကြောင့်) နောက်ဆုံးတွင် ap များစွာကစားသည်။art ၇၆၉၀၄ တွင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသော၊ စစ်မှန်သောပထမ ဦး စားပေးအစီအစဉ်ကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။
ပြီးပြည့်စုံသောအရာတစ်ခုအနေဖြင့်သင်ကားနှစ်ခုလုံးအကြားအမျိုးမျိုးကိုလိုချင်သည်ဖြစ်စေ၊ 76904 Mopar Dodge // SRT Top Fuel Dragster နှင့် 1970 Dodge Challenger T / A ၏အကြိုက်အထက်ထိုင်တော်မူ၏ 76905 Ford GT Heritage Edition နှင့် Bronco R မင်းအတွက်။
သောအလုပ်ကိုထောကျပံ့ Brick Fanatics သင့်ရဲ့ဝယ်ယူခြင်းဖြင့်ပါဘူး Lego Speed Champions ကျွန်တော်တို့ရဲ့တ ဦး တည်းမှတဆင့်သတ်မှတ် တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
76904 Mopar Dodge // SRT Top Fuel Dragster နှင့် 1970 Dodge Challenger T / A တည်ဆောက်ရန်မည်မျှအချိန်ယူရမည်နည်း။
အသံကျယ်ကျယ်နဲ့စာဖတ်တာကြာသလောက်ကြာတယ်။76904 Mopar Dodge // SRT Top Fuel Dragster နှင့် 1970 Dodge Challenger T / Aဒီကားကိုနှစ်မိနစ်လောက်အကြာမှာ ၆၀ မိနစ်လောက်အကွာအဝေးခွဲထားတယ်။ ဒီဟာတွေကပိုများတယ်articular မဟုတ်ရင်အကြံပြုနောက်ဆုံးမော်ဒယ်များထက်တည်ဆောက်။
76904 Mopar Dodge // SRT Top Fuel Dragster နှင့် 1970 Dodge Challenger T / A တို့တွင်မည်မျှအပိုင်းအစများရှိသနည်း။
627 အပိုင်းပိုင်းရှိပါတယ် 76904 Mopar Dodge // SRT Top Fuel Dragster နှင့် 1970 Dodge Challenger T / A
76904 Mopar Dodge // SRT Top Fuel Dragster နှင့် 1970 Dodge Challenger T / A သည်မည်မျှကြီးမားသနည်း။
မှ 76904 Mopar Dodge // SRT Top Fuel Dragster နှင့် 1970 Dodge Challenger T / A, 1970 Dodge Challenger သည် ၁၇ စင်တီမီတာ၊ ၇.၅ အကျယ်နှင့် ၅ စင်တီမီတာရှည်သည်။ dragster သည်17ရာမ ၃၆ စင်တီမီတာ၊ ၈ စင်တီမီတာနှင့် ၁၀ စင်တီမီတာရှည်သည်။ နောက်ဘက်တောင်ပံကိုမည်သို့မည်ပုံပေါ်မူတည်သည်။
76904 Mopar Dodge // SRT Top Fuel Dragster နှင့် 1970 Dodge Challenger T / A ကုန်ကျစရိတ်သည်မည်မျှကုန်ကျသနည်း။
76904 Mopar Dodge // SRT Top Fuel Dragster နှင့် 1970 Dodge Challenger T / A ပေါင် ၄၄.၉၉ / ဒေါ်လာ ၄၉.၉၉ / ယူရို ၄၉.၉၉ မှဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့တွဲဖက်ဈေးအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ် Lego Speed Champions နွေရာသီ 2021 ခုနှစ်တွင်ဖြန့်ချိထား။
← Lego Speed Champions 76905 Ford GT Heritage Edition နှင့် Bronco R ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
LEGO ၏ပထမ ဦး ဆုံးပုံရိပ် Marvel 76193 အဆိုပါ Benatar →